Mucaaradka Syria oo khiyaano ku tilmaamay shirka wada tashiga ah ee maanta lagu soo gabagabaynayo Dalkaasi – SBC
Mucaaradka Syria oo khiyaano ku tilmaamay shirka wada tashiga ah ee maanta lagu soo gabagabaynayo Dalkaasi
Mucaaradka Syria oo intooda badan aan ka qayb galayn shirka wada tashiga ah ee lagu qabanayo dalkaasi ayaa khiyaano ku tilmaamay kulankaasi,iyadoona lagu marin habaabinayo sida ay sheegeen shacabka isbadal doonka ah ee Syria.
Mucaaradka waxaa ay ganafka ku dhufteen wax wadahadal ah oo ay kala galayaan Dowlada Syria sidii ay xiligan isbadal u samayn lahayd,waxaana taa badalkeeda ay dalbadeen in Meesha uu ka baxao Nidaamka uu horkacayo Madaxweyne Bashaar Al asad.
Shirka wadatashiga ah ee ay soo qaban qaabisay Dowlada Syria ayaa waxaa ka qayb galaya Masuuliyiin ka socota Dowlada,Baarlamaanka,saxafiyiin,aqoon yahano,fanaaniin iyo masuuliyiin ka socota Ururada Bulshada,waxaana loogu googol xaarayaa sidii isbadal loogu samayn lahaa Dastuurka dalkaasi.
Shirkan oo maanta lasoo gabagabaynayo ayaa waxaa intii uu socday si aad ah looga falan qoonayay Arimaha Siyaasada,bulshada iyo weliba ganacsiga,iyadoona inta badan ay dadkii ka qayb galayay ay isla meel dhigeen in loo baahan yahay isbadal wadajira ah.
Kooxaha Mucaaraka waxaa ay ku adkaysanayaan in Dowlada Syria ay khiyaano wado,iyadoona inta uu shirka socday ay ka barbar socotay howl galka ay Ciidamada ka fulinayeen Ximis iyo weliba deegaano ku yaala Waqooyiga Idlab,iyadoona sid ay sheegeen ay ku dhinteen dad rayid ah.